မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB ဒီဇိုင်းကဘာလဲ| YMS
High-Frequency PCB ဆိုတာဘာလဲ
ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် 500MHz မှ2GHz အထိ မြန်နှုန်းမြင့် PCB ဒီဇိုင်း၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းသည် 1 GHz ထက်မြင့်သောအခါ၊ ၎င်းကို မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ယနေ့တွင်၊ အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ခလုတ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုများသည် တိုးလာနေပြီး ပုံမှန်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အချက်ပြစီးဆင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမိုမြင့်မားသော ဂီယာကြိမ်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။ အထူးအချက်ပြမှုလိုအပ်ချက်များကို အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များတွင် ပေါင်းစည်းသောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB တွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်း၊ လျှော့ချနိုင်မှုနှင့် အဆက်မပြတ် dielectric constant ကဲ့သို့သော အားသာချက်များစွာရှိသည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB - အထူးပစ္စည်းများ
ဤပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်အမျိုးအစားမှ ပံ့ပိုးပေးသော ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားမှုကို သိရှိရန် အထူးပစ္စည်းများ လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့၏ ခွင့်ပြုနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုသည် PCB များ၏ impedance ကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ PCB ဒီဇိုင်နာများစွာသည် Rogers dielectric material သည် dielectric loss နည်းပါးပြီး၊ signal loss နည်းပါးသည်၊ circuit production cost နိမ့်သည်နှင့် အခြားသော material များကြားတွင် လျင်မြန်သော turnaround prototype applications များအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သောကြောင့်၎င်းကို ရွေးချယ်သည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB Layout ကျွမ်းကျင်မှုများ
1. မြန်နှုန်းမြင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာ တံသင်များကြားတွင် ခဲများ နည်းပါးလေလေ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆားကစ်ဝါယာကြိုးများ၏ ခဲဝါယာသည် ပိုကောင်းပြီး အပြည့်အဝလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လှည့်ရန်လိုအပ်ပြီး 45 ဒီဂရီလိုင်း သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့် ခေါက်နိုင်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်သည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ပတ်လမ်းရှိ ကြေးနီသတ္တုပြား၏ ခိုင်ခံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ဆားကစ်တွင် ပါဝင်မှုကို ကျေနပ်စေသည်။ လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ ပြင်ပထုတ်လွှင့်မှုကို လျှော့ချရန်နှင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများ၏ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
2. ပင်အလွှာများကြားတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ဆားကစ်ကိရိယာကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ပါ။
"လမ်းပြ၏အလွှာများကြားတွင် လှည့်ပတ်မှုအနည်းဆုံးသည် ပိုကောင်းသည်" ဟုခေါ်သည် ဆိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသည့်နည်းအားဖြင့် ပိုကောင်းပါသည်။ မှတဆင့် A သည် 0.5pF ခန့်ရှိသော ဖြန့်ဝေနိုင်စွမ်းကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပြီး တစ်ဆင့်ခံအရေအတွက်ကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် မြန်နှုန်းကို သိသိသာသာတိုးမြင့်စေပြီး ဒေတာအမှားများ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချနိုင်သည်။
3. ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆားကစ်ကိရိယာ ပင်တန်းများကြား ခဲသည် တတ်နိုင်သမျှ တိုသည်။
အချက်ပြမှု၏ တောက်ပသော ပြင်းထန်မှုသည် အချက်ပြလိုင်း၏ ခြေရာကောက်၏ အလျားနှင့် အချိုးကျပါသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သည့်အချက်ပြမှု ပိုကြာလေ၊ ၎င်းနှင့် နီးစပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလေဖြစ်သောကြောင့် အချက်ပြများ၊ ပုံဆောင်ခဲ၊ DDR ဒေတာ၊ LVDS လိုင်းများ၊ USB လိုင်းများနှင့် HDMI လိုင်းများကဲ့သို့သော ကြိမ်နှုန်းမြင့်အချက်ပြလိုင်းများကဲ့သို့သော နာရီများအတွက်၊ တတ်နိုင်သမျှ တိုအောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
4. အချက်ပြလိုင်းနှင့် တိုတောင်းသောအကွာအဝေးမျဉ်းပြိုင်မျဉ်းမှ မိတ်ဆက်ထားသော "crosstalk" ကို အာရုံစိုက်ပါ။
မြန်နှုန်းမြင့် PCB ဒီဇိုင်း၏ကြီးမားသောပြဿနာသုံးခု
မြန်နှုန်းမြင့် PCB ဒီဇိုင်းကို လုပ်ဆောင်သောအခါတွင်၊ သင်၏ အချက်ပြမှုများကို အမှတ် A မှ အမှတ် B ဆီသို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ရယူရန် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သင်ကြုံတွေ့ရမည့် ပြဿနာများစွာရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့အားလုံးတွင် သတိထားရမည့် ထိပ်တန်းစိုးရိမ်မှုများမှာ-
အချိန်ကိုက်။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်၏ PCB အပြင်အဆင်ရှိ အချက်ပြများအားလုံးသည် အခြားအချက်ပြမှုများနှင့် ဆက်စပ်၍ သင့်လျော်သောအချိန်သို့ ရောက်ရှိနေပါသလား။ သင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပြင်အဆင်ရှိ မြန်နှုန်းမြင့်အချက်ပြမှုအားလုံးကို နာရီဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး သင့်အချိန်ချိန်ကို ပိတ်ပါက သင်သည် ပျက်စီးနေသောဒေတာကို လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
သမာဓိ။ တစ်နည်းဆိုရသော် သင်၏အချက်ပြမှုများသည် ၎င်းတို့၏ အဆုံးဦးတည်ရာသို့ ရောက်သည့်အခါ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ ဖြစ်သင့်သည်လား။ ၎င်းတို့မဟုတ်ပါက၊ သင်၏အချက်ပြမှုသည် ၎င်း၏သမာဓိကို ပျက်ပြားစေသည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အနှောင့်အယှက်အချို့ကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဆူညံသံ။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ သင်၏ signal များသည် transmitter မှ receiver သို့ ၎င်းတို့၏ ခရီးတစ်လျှောက်တွင် အနှောင့်အယှက်တစ်မျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသလား။ PCB တိုင်းသည် ဆူညံသံအချို့ကို ထုတ်လွှတ်သော်လည်း ဆူညံသံများလွန်းသောအခါ၊ သင်သည် ဒေတာပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
ယခု သတင်းကောင်းမှာ မြန်နှုန်းမြင့် PCB ဒီဇိုင်းတွင် သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ပြဿနာကြီးသုံးခုကို ဤဖြေရှင်းချက်ကြီးသုံးခုဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်-
Impedance ။ သင်၏ transmitter နှင့် receiver အကြား သင့်လျော်သော impedance ရှိခြင်းသည် သင့် signal များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ခိုင်မာမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် သင့်အချက်ပြမှုများ ဆူညံသံအပေါ် မည်မျှ အထိမခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။
လိုက်ဖက်ပါတယ်။ တွဲနေသော ခြေရာနှစ်ချောင်း၏ အရှည်ကို လိုက်ဖက်ခြင်းသည် သင့်ခြေရာခံများကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ရောက်ရှိစေပြီး သင့်နာရီနှုန်းထားများနှင့် ထပ်တူကျကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ Matching သည် DDR၊ SATA၊ PCI Express၊ HDMI နှင့် USB အပလီကေးရှင်းများအတွက် ကြည့်ရှုရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကွာ။ သင်၏ခြေရာများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပိုမိုနီးကပ်လေလေ၊ ၎င်းတို့သည် ဆူညံသံများနှင့် အခြားအချက်ပြမှုပုံစံများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်လေလေဖြစ်သည်။ သင့်ခြေရာများကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုနီးကပ်စွာ မထားခဲ့ခြင်းဖြင့် သင့်ဘုတ်ပေါ်ရှိ ဆူညံသံပမာဏကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့် PCB ၏စျေးနှုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ PCB ဖိုင်များ (Gerber ဖော်မတ်ကို ပိုနှစ်သက်သည်) ကို အပ်လုဒ်လုပ်ပြီး nextpcb.com/pcb-quote တွင် သင့်လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ကိုးကားပါမည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PCB များ
နှစ်ထပ် pcb ပုံမှန်
1. High Speed ​​PCB ဆိုတာဘာလဲ
2. ကြွေ PCB ဆိုတာဘာလဲ။
3. Ceramic PCB များကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ထားသနည်း။
4. PCB တွင် ကြေးနီအထူကား အဘယ်နည်း
6. PCB တွင် ကြေးနီတပ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း
ဖုန်းနံပါတ် MB: 0086-18271000872 ဖုန်းနံပါတ်: 0086- (0) 752-2050781 ဖက်စ်: 0086- (0) 752-2050783
၂ အလွှာရှင်းလင်းသောဘုတ် , Printed Circuit ဘုတ်အဖွဲ့ , Pcb , Mutilayer Fpc , Mutilayer Pcb , လျင်မြန်စွာပြန်လာ Pcb ,